Xaaladda Dhaqaale oo Wanaag laga Qabo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xaaladda Dhaqaale oo Wanaag laga Qabo
La daabacay torsdag 26 april 2012 kl 12.02
Iyada oo beryahan dambe ey shirkado waaweeyni xisaab-xirkoodii saddexda bilood ee sannadka ugu horeeyey ku soo ban-dhigeen miisaaniyad leh macaash wanaagsan ayaa la muujinayaa rajo wanaagsan ee laga qabo xaaladda dhaqaale ee dalka iyo bulshaduba.
Macaashka ballaaran ee shirkaduhu ku soo ban-dhigeen xisaab xirkooda ayaa ka cajabiyay saadaaliyeyaasha suuqyada dhaqaale oo aanan filaneyn.
Shirkadda gawaarida xamuulka ee Volvo AB ayaa ku soo ban-dhigtay xisaab-xirkeeda saddexdii bilood ee sannadka ugu horeeyey macaash dhan inta aan la cashuurin 5 600 malyuun oo koron, waana tiro 500 oo malyuun ka liidata marka loo barbar-dhigo macaashkii shirkadda sannadkii hore isla xilligaa. Agaasimaha shirkadda Volvo Olof Persson, ayaa sidan ku macneeyay xaaladda dhaqaale ee shirkadda:
- Waxay hoos u dhac naga soo gaareen xiriirkii baayacmushtar ee suuqyada waddammada Yurub iyo koonfurta Ameerika, waxaanse xaqiijin karaa in aannu ku biixiney suuqyada waddammada waqooyiga mareekanka. Bilihii ugu dambeeyey waxaan kor u kaceeyney 10%, waana tallaabo aan ku farasannahey.
Shirkadaha waaweyn ee kale ee macaashka dheeriga ah ku soo ban-dhigey xisaab xirkooda ayey ka mid yihiin SKF, Laval. Sidoo kale bangiyada ayaan iyaguna ka yareeysan. Sida uu sheegay war laga soo xigtay machadka saadaalinta dhaqaaluhu iney kor u kaceen goobihii shaqada ee manaafacaadku. Waxaa xasilmay xaaladdii shaqo ee warshadaha iyadoona rajadii ay dib u soo noqoneeyso.
Machadka ayaa sidoo kale u arka in dhaqaalaha guryuhuna ku sugan yihiin xaalad wanaagsan ee guryaha. Umana muuqato xaaladda suuqa shaqo mid liidata sidoo kale dhaqaalahana loo arkaa mid sii hagaagaya iminka iyo sannad foodda innagu soo haya.